MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward“Hti Tine Htaw” (Htaw B Hti Pauk) FAQs - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
“ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် (MPT4U, USSD နှင့် အခြားနည်းလမ်းများ) ဖြင့် ထောဘီပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူရုံနဲ့ “ထိတိုင်းထော” ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ် ရရှိဆော့ကစားနိုင်ပြီး ထောဘီဖုန်းဘေလ် အဆပေါင်း ၁၀၀ ထိ ကံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT4U website (https://my.mpt.com.mm/#/) မှတစ်ဆင့်လည်း MPT ကွန်ယက်ဖြင့် ဒေတာအခမဲ့ ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MPT4U မှမဟုတ်ဘဲ အခြားနည်းလမ်းများ (USSD, DMS စသည်တို့) ဖြင့် ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူပါက ထိတိုင်းထော (Htaw B Hti Pauk) အစီအစဉ်မှာဆော့နိုင်ပါသလား?
မေလ ၂၈ရက်နေ့မှစ၍ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းများ (MPT4U, USSDနှင့် အခြားနည်းလမ်းများ) ဖြင့် ထောဘီပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူပါက ထိတိုင်းထော (Htaw B Hti Pauk) အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ထောဘီပက်ကေ့ချ်ကိုဝယ်ယူပြီးပါက ထိတိုင်းထော (Htaw B Hti Pauk) ကစားရန် Linkပါသော SMSကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကံထူးထားတဲ့ ထောဘီဖုန်းဘေလ်ကို ဘာတွေအသုံးပြုလို့ရမှာလဲ?
ကံထူးထားသည့် ထောဘီဖုန်းဘေလ်များကို ရရှိထားသည့်သက်တမ်းအလိုက် MPT ဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် SMS ပို့ခြင်း၊ သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်တို့အတွက် ထောဘီပက်ကေ့ချ်၏နှုန်းထားများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကံစမ်းခွင့်ရတဲ့နေ့ ရဲ့ ၀၀:၀၀:၀၀ နာရီတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်နေ့သို့ သယ်ဆောင်အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ ပက်ကေ့ချ်တစ်ခုထက်ပို၍ ဝယ်ယူထားပြီး ကံစမ်းခွင့်များကို အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေပါက သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင် ၂၁:၀၀:၀၀ နာရီတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးစာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်က ထောဘီပက်ကေ့ချ်ဝယ်ရင် နယူးထိပေါက်ဂိမ်းမှာ ကံစမ်းခွင့် (၁)ကြိမ် ရရှိပါတယ်။ ယခု နယူးထိပေါက်ဂိမ်းမှာ ကံစမ်းခွင့် (၁)ကြိမ်မတွေ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
MPT သုံးစွဲသူများအတွက် အစီအစဉ်အသစ်အဖြစ် ထောဘီပက်ကေ့ချ်ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်း (MPT4U, USSD နှင့် အခြားနည်းလမ်းများ) ဖြင့် ဝယ်ယူတိုင်း ထောဘီဖုန်းဘေလ် အဆပေါင်း ၁၀၀ အထိကံထူးနိုင်တဲ့ “ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) အစီအစဉ်မှာ ကံစမ်းခွင့်များ ရယူကံစမ်းနိုင်မှာပါ။
Special Offer ထိပေါက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ?
Special Offer ထိပေါက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် (MPT4U, USSDနှင့် အခြားနည်းလမ်းများ) မှတစ်ဆင့် Special Offer ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူရုံနဲ့ Special Offer ထိပေါက်ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ် ရရှိဆော့ကစားနိုင်ပြီး ဒေတာဆုပေါင်းများစွာ ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MPT4U website (https://my.mpt.com.mm/#/) မှတစ်ဆင့်လည်း MPT ကွန်ယက်ဖြင့် ဒေတာအခမဲ့ ဖြင့် MPT4U app ကိုဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီး ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
B2B Offerများ၊ MPT Club၏ Offerများကို Package Hti Paukတွင် ပါဝင်ပါသလား။
မပါဝင်ပါ။B2B Offerများ၊ MPT Club၏ Offerများ( Pointsများလဲလှယ်ခြင်း)၊အခြား Offerများနှင့် အခြားသော MPT၏ ကမ်းလှမ်းချက်များသည် ပက်ကေ့ချ်ထိပေါက်တွင်မပါဝင်ပါ။
Special Offer ထိပေါက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ?
MPT မှ သုံးစွဲသူများရဲ့ တူညီမှုမရှိတဲ့ သုံးစွဲမှုအပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကမ်းလှမ်းမှုရရှိသူတိုင်း နှစ်သက်ရာပက်ကေ့ချ်ကိုဝယ်ယူပြီး Special Offer ထိပေါက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
PUBG Hti Pauk ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ?
“PUBG Hti Pauk” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် (MPT4U, USSD, နှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်PUBG ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူရုံနဲ့ PUBG ထိပေါက်ဂိမ်းထဲတွင် ကစားရန် အခွင့်အရေး(၂)ကြိမ် ရရှိနိုင်ပြီး ဒေတာဆုများ ကံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ MPT4U website (https://my.mpt.com.mm/#/) မှတစ်ဆင့်လည်း MPT ကွန်ယက်ဖြင့် ဒေတာအခမဲ့ ဖြင့် MPT4U app ကိုဒေါင်းလုဒ်ရယူပြီး ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
“PUBG Hti Pauk” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ?
MPT4U app နောက်ဆုံးဗားရှင်းရယူထားတဲ့ လက်ရှိ Prepaid စနစ် နှင့် Postpaid စနစ် အသုံးပြုနေသော MPT သုံးစွဲသူတိုင်း အစီအစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ပြီး ဒေတာဆုများ ကံစမ်း ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပက်ကေ့ချ်ထိပေါက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် (MPT4U, USSDနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ပက်ကေ့ချ်(ထောဘီ၊Special Offerနှင့် PUBGမှလွဲ၍)ဝယ်ယူရုံနဲ့ ပက်ကေ့ချ်ထိပေါက် ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ် ရရှိဆော့ကစားနိုင်ပြီး ဒေတာဆုကြီးများ ကံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT4U website (https://my.mpt.com.mm/#/) မှတစ်ဆင့်လည်း MPT ကွန်ယက်ဖြင့် ဒေတာအခမဲ့ ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပက်ကေ့ချ်ထိပေါက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ?
MPT4U app နောက်ဆုံးဗားရှင်းရယူထားတဲ့ လက်ရှိ Prepaid စနစ် Post paidစနစ် အသုံးပြုနေသော MPT သုံးစွဲသူတိုင်း အစီအစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ပြီး ဒေတာဆုကြီးများ များကို ကံစမ်းရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ CDMA သုံးစွဲသူများ၊ MPT ဝန်ထမ်းနံပါတ်များ၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေခြင်းမရှိသည့် ဝယ်ယူသူများသည် ပက်ကေ့ချ်ထိပေါက် ကံစမ်းမဲတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။